★မြန်မာ့အလင်း★: ရခိုင်ပြည်နယ်သည် မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် ဖြစ်သည်
မွတ်ဆလင်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ ၊ ဂျူး အားလုံးနဲ့ အဓိကရုဏ်း တခုပြီး တခု လုပ်နေတာ လူတိုင်းအသိပါ။ တချို့ မြန်မာတွေက ဆရာကြီးအထာနဲ့ မွတဆလင်ဘာသာကို လေးစားဖို့ ဆုံးမ သြ၀ါဒပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ လေးစားခံစေချင်ရင် တခြားဘာသာတွေလိုပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေမှဖြစ်မှာပေါ့။ သူတို့ လူလိုပြုမူရင် ဘယ်သူမှ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတိုင်း မွတ်ဆလင်တွေက စခဲ့တာချည်းပါ။ လူနည်းစုဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း တခြားဘာသာတွေကို ရန်ရှာတာ မကြာခဏပါပဲ။
2005 တုံးက ဆိုရင် အိန္ဒိယမှာ မွတ်ဆလင် တစ်ကောင် ဘတ်စကားကို အက်ဆစ်ပုလင်းနဲ့ ပေါက်ခဲ့တယ်။ ခရီးသည် ၁၁ ယောက် ထိခိုက်ပြီး ၄ ယောက် မျက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဗျာ။ ဟိန္ဒူများမှ ပလီ ၂ ခုကို မီးတင်ရှို့ချြင်းနဲ့ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ (ကုလားပြည်က မွတ်ဆလင်-ဟိန္ဒူ အဓိကရုဏ်း နောက်ကွယ်မှာ နအဖ ပတ်သက်နေပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းဖြစ်တိုင်း နအဖကို အပြစ်တင်ရတာ အလွယ်ဆုံးပါ) ကိုယ်ကလည်းရန်စသေးတယ်။ တဖက်က မခံနိုင်လို့ ပြန်လုပ်ရင် မျက်ရည်လေး ကလည် ကလည်နဲ့ မွတ်ဆလင်မိုလို့ အနှိမ်ခံရတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုပြန်တယ်ဗျာ။ တခြားဘာသာတွေ တီဗီပေါ်မှာ ငိုပြတာ မြင်ဖူးလို့လား? သူတို့ပဲ ငိုလိုက်၊ ရယ်လိုက်၊ အော်လိုက်နဲ့ အရူးတွေလိုလို ငကြောင်တွေလိုလို ပြုမူနေတာပဲ။ (သတင်းအပြည့်အစုံ )
ဒီကောင်တွေကို လူလို သဘောထားတဲ့ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာတွေလုပ်လဲ လေ့လာကြည့်ပါ။ မိန်းခလေးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်။ အမျိုးသမီးလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ခွေးတွေကို ပလီက ဆုငွေပေးပါတယ်။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို အကျင့်ကိက္ခာမရှိဘူးဆိုပြီး ပလီက စာစောင်တွေမှာ ထည့်ရေးတယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ခိုကပ်ပြီး အိမ်ရှင်ကို စော်ကားတာပဲဗျာ။ ဒီကောင်တွေ လူလိုပြုမူတာ တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားလို့ဆိုပြီး အခွင့်အရေးတော့ တခြားလူတွေနဲ့ တန်းတူ လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံနဲ့ စစ်ဖြစ်ရင် မွတ်ဆလင်ဘက်က ပါမယ်ဆိုပဲ။ အဲလိုကောင်မျိုးတွေ လူအခွင့်အရေးနဲ့ ထိုက်တန်သလား?
အခုလဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ခွေးတွေကို ရိုဟင်ဂျာနာမည် တပ်ပြီး ရခိုင်ဒေသ ပို့ဖို့ကြိုးစားနေပြီ။ မြန်မာအများစုကတော့ ကုလားကို လျှော့တွက်နေတယ်ဗျာ။ တော်တော်များများက စိတ်အေး လက်အေးဖြစ်နေတယ်။ တချို့ကတော့ ကောက်ရိုးမီးလိုပါပဲ တစ်ရက် နှစ်ရက်ပဲ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို အားတက်တရော ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ခဏာကြာတော့ မေ့ပျောက်ကုန်တယ်။ အဲလိုတော့ မရဘူးဗျ။ ရေရှည်လုပ်ရမယ့်အရေးပါ။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို တော်တော်ကို စိုးရိမ်တယ်။ သေခြာလေ့လာကြည့်ရင် သူတို့က လူနည်းစုဆိုပေမယ့် အားသာချက်တွေရှိနေပါတယ်။
၁။ ဒီမိုမြန်မာတွေရဲ့ ထောက်ခံ မှုရရှိထားပါတယ်။ (ဒီမိုမြန်မာအားလုံး မဟုတ်ပါ။ နအဖလူတွေအနေနဲ့ ဒီမိုတွေအားလုံးကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ရမ်းဖို့တော့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက် ဒီမိုမြန်မာတွေဘက်က ကာကွယ်ဖို့အသင့်ပါ)
၂။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက မြန်မာပြည်က လှေစီးဒုက္ခသည်တွေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ၀ါဒဖြန့်ပေးနေတယ်
၃။ ကုလားတွေက ငွေကြေးပြည့်စုံတယ်။ ငွေရှိတော့ အလုပ်တွင်ကျယ်တာပေါ့။ ၀န်ထမ်းတွေကို ပေးကျွေးပြီး လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်။
၄။လူအခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ယူပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ အကူအညီကို ရထားပါတယ်။
၅။ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပမှာ မွတ်ဆလင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့က နည်းပေါင်းစုံ အသုံးချပြီး ကူညီနိုင်ပါတယ်။
၆။ စည်းလုံးပြီး ပိုမိုတက်ကြွပါတယ်။ (ယုတ်မာကောက်ကျစ်ဖို့ဆိုရင် အင်မတန်စည်းလုံးတယ်။ ဗုံးခွဲ၊ စစ်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတိုင်း မွတ်ဆလင်တွေ ပတ်သက်နေပါတယ်။ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ မွတ်ဆလင်ရှာလို့ မတွေ့ပါ)
သူတို့ဘက်မှာ အားသာချက်တွေ ရှိနေပမယ့် ကျနော်တို့ဘက်မှာတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။
၁။ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို လက်တွေ့ ဆန့်ကျင်လိုတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ တနေ့ကို ၂ နာရီလောက် သတင်းတွေ နားထောင်၊ ဘလော့တွဖတ်ပြီး အချိန်ဖြုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၅ - ၁၀ မိနစ်လောက် မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ကူညီလုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။
၂။ ကျနော်တို့တွေက လုံးဝ မစည်းလုံးဘူးဖြစ်နေတယ်။ မိမိတိုင်းရင်းသား အရေး၊ မိမိခေါင်းဆောင်အရေး၊ မိမိဝါဒအရေးပဲ ဦးစားပေးတယ်။ ကရင်က ကရင်အတွက်၊ ကချင် ကလဲ ကချင်အတွက်၊ ရခိုင်ကလဲ ရခိုင်အတွက်၊ ဗမာကလဲ ဗမာအတွက် ပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ရခိုင်ကိစ္စလို့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေက ခံယူထားပါတယ်။
၃။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအပေါ်မှာ ဖြောင့်မတ်စွာ မလုပ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့ပဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။ နအဖဘက်က ရိုဟင်ဂျာအရေးအကြောင်းပြပြီး ဒီမိုသမားအားလုံးကို ထိုးနှက်နေတယ်။ ဒီမိုသမားတွေကလည်း နအဖကို နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာကို အသုံးပြုပြီး လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်နေတယ်လို့ လိမ်ညာ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကတော့ နိုင်ငံရေးအမြတ် ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းမတွေ့လို့ ဘေးမှာပဲ ထိုင်နေပါတယ်။
၄။ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို စိစစ်ရမယ့် ၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ အတွေ့အကြုံရှိ ၀န်ထမ်းတွေက အောက်ချေမှာပဲ လုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ စစ်သားတွေကပဲ ချယ်လှယ်နေတယ်။ လုပ်ငန်းတွေဟာ ထိရောက်မှု လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ဒီအထဲလဒ်စားတဲ့ ပြဿနာကလဲ တော်တော်ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ပါ။
၅။ ဦးသန်းရွှေ၊ ဦးမောင်အေးနဲ့ ဦးသန်းစိန် တို့တွေဟာ အသက်အရွယ် ကြီးနေပါပြီ။ ခေါင်းအပူမခံနိုင်လို့ ပီးစလွယ်လုပ် မယ့်အခြေအနေရှိနိုင်ပါတယ်။
၆။ ထိုင်း၊ မလေးရှား အစိုးရတွေက သူတို့ဆီက လူလိမ်ကုလားတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြန်ပို့ဖို့လုပ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်ကို ပို့ရတာပိုလွယ်ပါတယ်။ လူအခွင့်အရေးလေးစားပါဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးနဲ့ ကျနော်တို့ ဘက်ကိုခွေးတွေ လက်ခံခိုင်းနေတယ်။ နအဖအနေနဲ့ သူတို့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအတွက် လက်ခံကောင်း လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မြေငှားပြီး ငွေရှာနေတဲ့ နအဖကို မယုံရဲတာ အမှန်ပါ။
၇။ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်း လှုပ်ရှားမှ ထောက်ပံ့ငွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေမျက်နှာကြည့်ပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို နအဖ လက်ခံအောင် ဖိအားပေးလှုပ်ရှားနေပါတယ်။
ကျနော်တို့ဘက်မှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်အများကြီးပါပဲ။ ကုလားတွေဘက်က အခြေအနေတွေ ပိုပြီးကောင်းနေတယ်။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် လူအရေအတွက်က အရေးမကြီးဘူးနော်။ အရည်အချင်းက အဓိကပဲဗျ။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် ဖြစ်သွားမှာ။ ခင်ဗျားတို့တွေ ငါက ဗမာ၊ ငါက ကရင်၊ ငါက ရှမ်း၊ ငါက ကချင်၊ ငါက ခရစ်ယာန်ပဲ ဆိုတာတွေကြည့်နေဦးမလား? ဒီဟာက ရခိုင်ကိစ္စ ပဲ ငါ့ကိစ္စမဟုတ်ဆိုပြီး ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မွတ်ဆလင် ရခိုင်ကိုရသွားရင် ခင်ဗျားတို့တွေ အားလုံးအသတ်ခံရပါမယ်။ ခရစ်ယာန်တွေလဲ အမျိုးဖြုတ်ခံရပါမယ်။ ခြောက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ခရစ်ယာန်တွေ အင်ဒိုနီးရှားမှာ နှစ်တိုင်း အသတ်ခံနေရတာ အသိဆုံးပါ။ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးဟာလည်း ဖျက်ဆီးခံရမယ်။
ခင်ဗျားတို့ သတိထားရမှာ ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ကျနော်တို့ဘက်က မဟုတ်ဘူး။ ကုလားတွေဘက်ကနေ ဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ကို အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာ အကျယ်ရှင်းဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ . . . . အခုလိုပဲ ဘေးကနေ ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်အဖြစ် ဆက်လုပ်မလား? ကုလားတွေလိမ်နေတာကို ဒေါသထွက်တော့ ဘာအကျိုးရှိလဲ? ကုလားတွေ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့အချိန်မှ ကုလားကိုဆဲမှာလား? ကုလားတွေ တိုင်းပြည်ထဲ ၀င်မလာအောင် တတ်စွမ်းတရွေ့မကူညီပဲ၊ သူတို့ ၀င်လာပြီး လူသတ် မဒိမ်းကျင့်မှ အဖေကယ်ပါ၊ အမေကယ်ပါ လုပ်မလား? ဒါမှမဟုတ် . . . ရခိုင်ကို မွတ်ဆလင်ပြည်နယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှ ပြည်တွင်းစစ်လုပ်မလား? ဖြေပေးပါ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ထားကိုလုံးဝ အားမရဘူး။ မသိမ့်သိမ့်အိတို့ လုပ်ထားတဲ့ petition မှာ ဒီနေ့အထိ လူ ၅၆ယောက်ပဲ လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတာ အချိန်လည်းပေးရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆိုရင် “သူတို့တွေက နိုင်ငံအတွက် ကိုယ့်ထမင်းကိုစားပြီး ဂျီးတော်နွားကျောင်းနေတာပဲ” လုပ်ရတဲ့သူ အားရှိအောင် လက်မှတ်လေးထိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စာနာတဲ့စိတ်မျိုး မရှိဘူး။ အဲဒီ petition ကို တခြားလူတွေဆီလက်ဆင့်ကမ်းပြီး လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာလဲ မလုပ်ဘူး။ ကျနော်တို့လည်း ဆရာကြီးတွေလိုပြုမူနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ချိန်၊ စာကြည့်ချိန်၊ အလုပ်လုပ်ချိန်တွေကို လျှော့ပြီး မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်နေပါတယ်။ တခြားမြန်မာတွေကို မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆီပုံးတွေမှာ ပြောဆိုဖို့၊ ဘလော့ ထောင်ဖို့ ၊ ဆောင်းပါးရေးဖို့၊ ကဗျားရေးဖို့ ၊ အသိမိတ်ဆွှေတွေကို စည်းလုံးဖို့ အမျိုးမျိုးတိုက်တွန်း နေပါတယ်။ လုံးဝ မကူညီဘူး။ အဲလိုတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ အိပ်ပျက်ခံပြီး လုပ်လို့ရလာတဲ့ ရလဒ်က ဆီပုံးမှာ နေ့စဉ် အဆဲခံရတာပဲရှိတယ်။
နောက်ဆုံးဗျာ ဆောင်းပါး မရေးတတ်ဘူး၊ သူငယ်ချင်းတွေကို မစည်းလုံးနှိုင်ဘူး၊ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးလဲ မပြောဆိုတတ်ဘူး ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘလော့ ၃ ခုကို လူသိအောင် ကူညီဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝ လိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ အကြံကို သဘောမတူလို့ အကောင်အထည် မဖေါ်ပေးတာလို့ မှတ်ယူပါတယ်။ သဘောမတူလဲ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ဦးဆောင်ပါ။ အဓိက မွတ်ဆလင်ဝါဒကို အမြစ်ကနေ လှန်ပြစ်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား? မွတ်ဆလင်ပြုတ်ကျရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေး အစီအစဉ်ကို စဉ်းစားပေးပါ။ ပြီးရင် ကိုဟာဂျီဝက်စလီ ထံ email ပို့ပြီးပေးရင် သူတို့ ဘလော့မှာ တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက် နောက်က လိုက်ပါမယ်။ တစ်ပါတ်အတွင်းပြီးအောင် စဉ်းစားပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 3:59 AM
hahahaha..see ..zaw myo...i told u..u'll always bealooser the rest of your life..because.. "A sa kg mhaahnaung thay char" kwa. your army government ga..thway kwal oht chote tar lay. bar lo see lone pho lar pyaw nay dar al? ur army government ga..people ko poor phyit pee politic philosophy dead aung trained lote htar dar lay....hopeless.
myslim budhimahti ga yone ga...government's htwin lone lay....thu myat thar tha nar phyet pee thu dot politic mharanay chaung aung lote tat htwin lone so dar lu dai thi pee thar mo shinn pya sa yar taung ma lo boo.
I'm eye witness how government plan to do muslim-budhismahti ga yone. they sent monks to muslim yat kwat like mingalar taung nyunt and approach to muslim girls talk dirty like "zip phyote pee tat loe chin dal kwar" n girls disguss n yell muslim boys to help n startafight..but that time n now on people know it already ..n nobody response .. so they were not success that time ..only monks walking n talking dirty to girls for the people to remember budha thar tha nar is dirty. thats is!
i'll pity you and your hard work doing this. i'magood muslim..i choose to be muslim because muslim relegion not allow to be lazy..they'll wake u up early in the morning from the mosque time to wake up..do prayer for mentally n physically with cleaningness. they startaday with helping together for succeeding together. if they all selfish like budhism ..they all will be loosers how could they stand world's number one thar tha nar ..huh ?
" the islam the great "
i've studied with open heart :not close eyes n narrow minded" every thar tha nar has bibbles = treasure.... i took what applicable for my life time's success. the rest u may not need to use it but others may need it..so we do not need to destroy the part that we don't need it cos others may need it. must think with open heart..try to good contribution to the community no matter what relegion they all are stillahuman. I'mamuslim but on my travel i met budhism burmese who were trouble in malaysia. they were cheated by employeer n no salary paid for three months when i met them..the employeer give them not enough food to eat so that they can still work free for them ..their passport were in employeer's hand n can not run away too..n the money for them to come n work in malaysia was they morgage their house n some people borrow with 10 toe .. see their life deadly trouble..as i know some people from myanmar embassy in malay ..i visit them n request them to go n help for myanmar to help myanmar..if i think oh..this budhism are always trying to kill our relegion i should clap them when they r trouble ? no way ..i keep in mind human minded only n help them with my expense for 200 of them to get back salary n not to be cheated in future by embassy officer to go n discuss with the employer that the authorities keeping n eye on them. they were sooo happy to get back their money for pay back mortgage house etc.. I look at tham happy n i'm happy for them although nobody come to sayaword of thanks as thankless people..but its ok for me..big hearts forgives small hearts.
bar thar...thar tha nar phyat tal so dar ..lu dway ma lote phoo...kway loe ma thar or phar thal ma nat sat mway dat thu myar thar lote thee = sout sint ma shi bar = dirty thar tha nar win myar thar lote thee.
ယူတီကာက ဟိုးလီးအစ်စလမ် ဌေးလွင်ဦး ကရင်မတွေကို ကုလားဇာတ်ထဲသွင်းနေတာစုံစမ်းပေးပါ။ ဘန်ကောက်မှာတုန်းကကရင်မ။ဗမာမတွေကို ကုလားတွေနဲ့ ပေးစားခဲ့တာ ဖိုဝိန်းကလူတွေသိတယ်။
ယူတီကာက ဟိုးလီးအစ်စလမ် ဌေးလွင်ဦး ကရင်မတွေကို ကုလားဇာတ်ထဲသွင်းနေတာစုံစမ်းပေးပါ။ ဘန်ကောက်မှာတုန်းက ကရင်မ။ဗမာမတွေကို ကုလားတွေနဲ့ ပေးစားခဲ့တာ ဖိုဝိန်းကလူတွေသိတယ်။